Methyltrienolone powder (965-93-5) Abavelisi kunye nabaNikezeli-Umzimveliso
I-Methyltrienolone powder ingenye ye-steroid engcono yokuqhekeka kwesisu. I-Methly trenbolone iyimisipha ephezulu yokuphucula iimveliso. I-Metribolone yenye ye-anabolic steroids yomlomo onamandla kakhulu.
Ekrwada Methyltrienolone umgubo (965-93-5) yokuzonwabisa
Ekrwada Methyltrienolone umgubo (965-93-5) Inkcazo
Ekrwada powder Methyltrienolone yi steroid-androgen steroid ngomlomo esebenzayo yokuba nandrolone 17α-alkylated (19-nortestosterone) ithe. Ayithengiswanga njengedakamizwa yesigqirha kunye nesongezelelo sesondlo ngenxa yeempembelelo ezinobunzima be-androgenic kunye nobunobuthi besibindi. Nangona kunjalo, ngokuqhelekileyo kusetyenziswa njengendawo yokubhekisela kwi-vitro biological activity for study biochemical studies. Iyakwazi ukubopha ngamandla kwi-androgen receptor kwaye ingasetyenziselwa njengeleta ebumbene kunye ne-androgen receptor kwi-prostate nasezikhunjini ze-prostatic.
Izifundo zibonise ukuba ukuthatha i-anabolic steroid yomlomo kunye nokutya kunokunciphisa ukufumaneka kwayo. Oku kubangelwa kwamanqatha-enyibilikayo uhlobo iihomoni steroid, nto leyo ukuvumela ezinye ichiza ukunyibilikisa ngamanqatha undigested ukungondleki, ukunciphisa kukufakwa wayo ukusuka phecana zesisu. Ukusetyenziswa ngokugqithiseleyo, i-Raw Methyltrienolone powder kufuneka ithathwe kwisisu esingenalutho.
I-Raw Methyltrienolone powder (965-93-5) Suqobo
Igama lemveliso I-Raw Methyltrienolone powder
Igama leKhemikhali I-METRIBOLONE; i-Methyltrienone; i-17A-METHYL-TRENBOLONE; iMetribolone; i-Methyltrenbolone (i-Metribolone)
uhlobo Numama I-Raw Methyltrienolone powder
Iqela leziyobisi I-Steroids; ii-Intermediates & Fine Chemicals; i-Pharmaceuticals; i-trenbolone series
Inani leCAS 965-93-5
I molecular Fi-ormula C19H24O2
I molecular WSibhozo 284.39
IMasaisotopic Mass 284.178 g / mol
Ukuxuba Point 170 °
Ukubilisa Point 485.9 ± 45.0 ° C kwi-760 mmHg
umbala ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka
I-Raw Methyltrienolone powder Aukuguquka isetyenziswe njengendawo yokubhekisela kwi-vitro biological activity for biochemical studies. Iyakwazi ukubopha ngamandla kwi-androgen receptor kwaye ingasetyenziselwa njenge-ileyibini yokubambisana ye-androgen receptor kwi-prostate nakwiisisu zomzimba.
Yintoni i-Raw Methyltrienolone powder (965-93-5)?
I-Methyltrienolone yenye ye-anabolic steroids yomlomo onamandla kakhulu. Le arhente isiphumo se-trenbolone (trienolone), esiye sa-c-17 alpha alkylated ukuvumela ukulawulwa komlomo. Olu lungiso luye lwadala i-steroid enamandla kakhulu kunomzala wakhe ongekho methylated. I-potency yayo ilinganiswe ukuba ivela kwi-120-300 ngamaxesha angaphezu kwee-methyltestosterone, kunye nokuhlukana okukhulu phakathi kwe-anabolic kunye ne-androgenic. I-535 536 Milligram ye-milligram methyltrienolone iyona ephezulu esebenzayo i-steroid kunanoma yiphi i-arhente ethengiswa kwikharhwebo lentengiso, edinga amanani ezincinane nje .5-1 milligram ngosuku ukuqaphela umphumo onamandla we-anabolic. Ubungakanani balo buhambisana kuphela neyonyango oluhambelana naso, nangona kunjalo, oluye lwawuthintela ukusetyenziswa kwalo lwangoku kwi-laboratory kuphela.
I-Raw Methyltrienolone powder (i-965-93-5) isebenza
I-Methyltrienolone, emva kokuba i-metabolized by acids acids ifikelela kunye ne-androgen receptors kwaye ibophe ngokuqinile nayo. I-Androgens ngokuqhelekileyo i-hormone yesini esinobudoda obangela ukuvelisa i-anabolic. Qaphela apha ukuba isisiseko esiyinhloko esinceda la ma hormone avelise iziphumo ze-anabolic yi-androgen receptors. Zivuselela izakhi zofuzo ezikhokelela ekunyuseni kwimizimba yamandla kunye namandla.
I-Testosterone (enye ye-androgens eninzi) yi-hormone eyintloko ebangela ukukhula komzimba kunye nokulungiswa komzimba wakho. I-Androgen receptors iqinisekisa ukuba umzimba uphendula ngokufanelekileyo kule hormone eyimfihlo. I-Testosterone ibopha kunye nala ma-receptors kwaye ifinyelela kwiiseli ze-muscle apho zidlala indima yayo.
I-Methyltrienolone, ngokuzibophelela ngamandla kunye ne-androgen receptors, inceda ukususa imiphumo ye testosterone, ngaloo ndlela iququzelele inzuzo ekumanyameni kwamascle kunye namandla.
I-Raw Methyltrienolone powder (965-93-5) Isisombululo
Iingcali zincoma ukuba uthathe amanani aphantsi ale steroid anabolic. Uluhlu olufanelekileyo kakhulu lubonwa ngokuba phakathi kwe-0.5mg ukuya kwi-2mg. I dose kufuneka ihlukaniswe kwicandelo le-3-4 kunye ne dose ethathwa malunga neeyure ze-1.5 ngaphambi kokuba usebenze. Njengoko kuthethwe ngaphambili, i-methyltrienolone yisisisi esinamandla kakhulu kunye nokugqithisa kakhulu kungenza umonakalo omkhulu kwimpilo yakho. Ngoko ke, gcina amanani akho aphantsi kwaye imizila yakho imfutshane. Ubungakanani bemizuzu ye-methyltrienolone yi-6-8 iiveki. Nangona kunjalo, kubaqalayo, kucetyiswa ukuba kugcinwe ixesha elifutshane lexesha elifutshane, okt iiveki ze-4 okanye ngaphantsi.
Uphando lubonisa ukuba ukuthatha i-methyltrienolone kunye nokutya kunokunciphisa ukuhlaziywa kwe-intanethi, oko kukuthi kunciphise ukutyunjwa kwezondlo emzimbeni wakho. Amafutha amaninzi angadliyo okubangelwa kukunciphisa ukuhlaziywa kwezinto eziza kuncitshiswa aza kuthintela imiphumo ye-anabolic yale steroid. Ngoko ke, ukufumana inzuzo enkulu, siyakumcebisa ukuba uyithathe kwisisu esingenalutho.
I-Raw Methyltrienolone powder (965-93-5) Sebenzisa
I-Methyltrienolone yenye ye-anabolic steroids eqineleyo eneenzuzo ezininzi. Nalu uluhlu lweenzuzo eziphambili oza kuba nazo ngelixa uhamba ngebhayisikili nale nkunkuma:
(1) Ayinakucacisa. Oku kuthetha ukuba ayiguquki kwi-estrogen. Qaphela apha ukuba i-estrogen yi-hormone eyenza isifuba, kwaye ilawula umjikelezo wesini kunye nokuzala okubafazi. Ngaloo ndlela amahomoni aguquka kwi-estrogen anokukhokelela ekubeni u-gynecomastia, oko kukuthi amabele aphakanyisiwe kubantu. Ngaphezu koko, amanqanaba e-estrogen ephezulu emzimbeni angabangela izifo zentliziyo kunye nomhlaza wesibeletho. Kodwa awudingi ukuxhalaba kuba ngelixa uhamba ngebhayisikili nokhuseleko lwakho konke oku njengoko kungaguquki kwi-estrogen.
(2) Njengoko ingaguquki kwi-estrogen, igcina umzimba womsebenzisi ukhuselekile ekugcinweni kwamanzi ngokuphelisa amanzi angafunekiyo emzimbeni. Ngako oko, ungayisebenzisa ngexesha lokutya okanye ngelixa ulungiselela ukhuphiswano.
(3) Yandisa kakhulu ubunzima bomzimba. Le nto ayinayo yonke i-anabolic steroids inako ukwenza. Uninzi lwe-steroids lubonisa ukwanda okwenyukayo kwiimfucuza zomzimba kodwa zimbalwa kakhulu ezikhokelela ekukhulekeni kwemisipha kunye nalo. I-Methyltrienolone yileyo enye i-steroid eqinisekisa ukuqina kobuhlungu obunzima obunika umzimba wakho ukhangele ngamandla.
(4) Uza kuba neenyuka ezibalulekileyo ngamandla xa uhamba ngebhayisikili nale steroid. Kuya kukunceda ngexesha lakho lokufunda ngokunyusa amandla akho kunye namandla. Ngaloo ndlela uya kuba nako ukuqeqesha ixesha elide kwaye kaninzi.
(5) Yandisa ubuxhakaxhaka. Ukuba ngumdlali okanye umakhi womzimba, ngokuqinisekileyo uya kufuna iimpawu ezivelele, ezibonakalayo ukunika imiyalezo yakho inkcazelo.
(6) Inamandla kakhulu kwaye inokuthelekiswa neentonga ze-2 ukuya kwi-3 ngomlomo we-steroids eqinile ngebhayisiki ngexesha elinye. Ngoko ke, nokuba kusetyenziswe amanani amancinci kubangela ukunyuka okukhulu kwiimisipha kunye namandla.
Thenga i-Methyltrienolone powder esuka eBuasas.com
I-trenbolone ephakamileyo ye powder (10161-33-8)
I-Trenbolone ephakamileyo ye-Trenbolone (i-Parabolan) ipowder (23454-33-3)
I-trenbolone ephakamileyo ye-Acetate powder (10161-34-9)
I-trenbolone e-Raan-enanthate powder (10161-35-8)